Ikike Ndị Ọrụ - Shenzhen SOSLLI Teknụzụ Co., Ltd.
SOSLLI grasps "SOSLLI mee ka ụwa ka mma" echiche ọrụ ọrụ mmekọrịta, na-akwado usoro iwu na ụkpụrụ nke UN zuru ụwa ọnụ, lekwasịrị anya na atụmatụ na mpaghara nke ikike mmadụ, Ọrụ, gburugburu ebe obibi na mgbochi nrụrụ aka 10, ma guzobe ihe ntụrụndụ ọrụ "6" maka ọrụ mmekọrịta, were maka ndị ahịa, maka ndị ọrụ, maka ndị mmekọ, maka ndị na-etinye ego, maka gburugburu na ọrụ ọhaneze.
1. Mmepe nkwado
2.SOSLLI omume na nnabata
3. ndị ọrụ
4. Ibu ahia ahia
5. Gburugburu ebe obibi
6. chainlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ
Iwu iri nke UN jikọrọ ọnụ
Nkwado ụlọ ọrụ na-amalite na usoro ụlọ ọrụ bara uru yana usoro dabere n'ịzụ ahịa. Nke a pụtara ịrụ ọrụ n'ụzọ opekata mpe, rụzuo oke ọrụ na mpaghara oke ruru mmadụ, ọrụ, gburugburu na nrụrụ aka. Azụmaahịa ndị nwere ọrụ na-ewepụta otu ụkpụrụ na ụkpụrụ niile ebe ha nwere ọnụnọ, marakwa na ezigbo omume n'otu mpaghara anaghị ewepụta ihe ọjọọ na mpaghara ọzọ. Site na itinye ụkpụrụ iri nke UN Global Compact n'ime atụmatụ, atumatu na usoro, yana ịtọlite ​​ọdịmma nke iguzosi ike n'ezi ihe, ụlọ ọrụ abụghị naanị na-eburu ibu ọrụ ha na ndị mmadụ na mbara ala, kamakwa na-esetịpụ ntọala maka ihe ịga nke ọma ogologo oge.
A na - enweta iwu iri nke United Nations Global Compact si: Nkwupụta ofwa Nile Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ, Nkwupụta Laborwa Ọrụ Ndị Ọrụ Mba Nile na Ọrụ isi na ikike na Ọrụ, Nkwupụta Rio na Gburugburu Ebe obibi na mmepe, yana Mgbakọ Mba Ndị Dị na United States megide Nrụrụ Aka.
1kpụrụ nke 1: Azụmaahịa kwesịrị ịkwado ma sọpụrụ nchedo nke oke nwere ikike ịkpọ mmadụ n'ụwa niile; na
2kpụrụ nke 2: gbaa mbọ hụ na ha esighị ike na mmebi iwu ndị ruuru mmadụ.
3kpụrụ nke 3: Ndị ọchụnta ego kwesịrị ịkwado nnwere onwe nke mkpakọrịta na nnabata nnwere onwe nke ikike mkwekọrịta mkpokọta;
4kpụrụ nke 4: ikpochapụ ụdị mmanye na mmanye nile;
5kpụrụ nke 5: ikpochapụ ọrụ ụmụaka; na
Isi 6: kpochapu ikpa oke na oru na oru.
7kpụrụ nke 7: Ndị ọchụnta ego kwesịrị ịkwado usoro nlezianya maka nsogbu ndị metụtara gburugburu ebe obibi;
8kpụrụ nke 8: bido usoro iji kwalite nnukwu ọrụ gburugburu ebe obibi; na
9kpụrụ nke 9: na - akwado mmepe na mgbasa nke teknụzụ ndị nwere gburugburu ebe obibi.
10kpụrụ nke 10: Ulo oru kwesiri imegide nrụrụ aka n'ụdị ya niile, gụnyere ịpụnara mmadụ ihe na iri ngo.
Sili batrị Lithium Ion, Ngwunye batrị, Batrị 20ah Lithium Ion, Ibe batrị Lithium, Batrị Lithium batrị, Batrị Lithium-Ion 3.6v,